महंगा नेपाली बलर, सन्दीपले ३ ओभरमा दिए ३४ रन ! (LIVE) - Everest Dainik - News from Nepal
महंगा नेपाली बलर, सन्दीपले ३ ओभरमा दिए ३४ रन ! (LIVE)
काठमाडौं, साउन १२ । आइसीसी टि–२० विश्वकप एसिया क्षेत्र छनोट अन्तर्गत आफ्नो अन्तिम खेलमा सिंगापुरविरुद्ध नेपालका स्पिनर महंगा सावित भएका छन् । नेपालले दोस्रो ओभरमै विकेट लिन सफल भए पनि दबाबमा राख्न नसक्दा सिंगापुरले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरिरहेको छ ।
नेपालका फास्ट बलरले कम रन खर्चिए पनि स्पिनर भने महंगा सावित भएका छन् । शनिबार कुवेतविरुद्ध उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका सन्दीप लामिछाने र बसन्त रेग्मी आज महंगा सावित भएका हुन् । सन्दीपले ३ ओभरमा ३४ र बसन्त रेग्मीले २ ओभरमा २९ रन दिइसकेका छन् । ताजा अवस्थामा सिंगापुरले १६ ओभरमा २ विकेट गुमाएर १४५ रन जोडेको छ ।
याे पनि पढ्नुस सीपीएलः पूर्व टिमबीरुद्ध सन्दीपको घातक बलिङ, बार्बाडोस जित नजिक
नेपालको प्लेइङ ११ः पारस खड्का (कप्तान), ज्ञानेन्द्र मल्ल, शरद भेषावकर, वसन्त रेग्मी, सोमपाल कामी, अभिनाश बोहरा, सन्दीप लामिछाने, दीपेन्द्रसिंह ऐरी, विनोद भण्डारी, करण केसी, रोहितकुमार पौडेल ।
याे पनि पढ्नुस टी–१० लिगः कलन्दर्सविरुद्ध बलिङ गर्दै सन्दीपको टिम
ट्याग्स: नेपाल भर्सेस सिंगापुर, सन्दीप लामिछाने
सरकारलाई काभ्रेलीका तर्फबाट डल्लै धन्यवादः पूर्वमन्त्री बाँस्कोटा